RASMI: Maxkamadda CAS Oo Ku Dhawaaqday Xilliga Ay Shaacinayso Go'aanka Rafcaankii Man City Lagaga Mamnuucay Champions League - Gool24.Net
RASMI: Maxkamadda CAS Oo Ku Dhawaaqday Xilliga Ay Shaacinayso Go’aanka Rafcaankii Man City Lagaga Mamnuucay Champions League
Maxkamadda CAS ayaa shaacisay waqtiga ay ku dhawaaqayso go’aanka ay ka gaadhay rafcaankii ay usoo gudbisatay Manchester City ee ay ka qaadatay ganaaxii ay UEFA labada sannadood kaga mamnuucday tartanka Champions League.
Man City ayaa bishii February waxay maxkamadda garsoorka khilaafaadka ciyaaraha ee CAS ay u qaadatay rafcaan ka dhan ah ganaaxa UEFA oo ku eedaysay in sannadihii u dhexeeyey 2012 ilaa 2016 ay jabiyeen sharciga dhaqaale wanaagga ee FFP.
UEFA waxay City iskugu dartay laba sannadood oo ay Champions League ka maqnaato iyo £25 milyan oo Gini oo ganaax ah lacageed ah.
City ayaa muujisay inay niyadsamaan ku qabto go’aanka kasoo bixi doona maxkamadda, waxaanay ku adkaysatay in haba yaraatee aanay wax qalad ah samayn oo dembiyada ay UEFA ku oogtay ay yihiin waxba kama jiraan.
Pep Guardiola oo shalay hadlayay ayaa caddeeyey in kooxdiisu ay diyaar u tahay wax kasta oo kasoo baxa CAS, waxaanu yidhi: “Diyaar ayaanu nahay. Kalsooni badan iyo aaminaad ayaanu ku qabtaa in lanoo ogolaan doono inaanu ciyaarno Champions League, sababtoo ah, waxaanu doonaynaa inaanu garoomada ku jirno sannadahan.”
Maxkamadda CAS ayaa shalay ku wargelisay Manchester City waqtiga ay shaacinayso go’aankeeda, kaas oo lagu dhawaaqi doono Isniinta soo socota xilli ay saacaddu ku beegan tahay duhurnimada.
City oo horyaalka Premier League lagaga adkaaday sannadkan, isla markaana 23 dhibcood ka dambaysa Liverpool oo hoggaanka haysa, waxay isku diyaarinaysaa inay Real Madrid ku martigeliso lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League horraanta bisha August, iyadoo lugtii hore ee Santiago Bernabeu ay kusoo badisay 2-1.